Linux zvipo mazano Krisimasi iyi 2017 | Linux Vakapindwa muropa
Pfungwa dzeLinux zvipo ino yeKisimusi 2017
Kisimusi iri kuuyaVamwe vava kutoverenga mazuva kusvika gore idzva, vese vaine tarisiro yekuti 2017 nyowani iri nani pane iyi 2016, inounza tariro yakawanda, kubudirira uye mufaro. Nguva isina kupokana izere nemashiripiti uye inozivikanwa kwazvo kune vazhinji vane mweya weKisimusi uye unovadzosera kuhuhwana. Naizvozvo, pakati pekudya kwemanheru, kushongedzwa uye zvishuwo, zvipo zvatinowanzopa kune vanozivana nevadikanwi hazvigone kupotsa. Uye kubva kuLxA tichaenda kupa mamwe mazano ...
Ehe isu tinokumbira tech zvine hukama zvipo, sezvo iri blog inobata nemusoro uyu. Nguva zhinji hatizive chekupa, kunyanya avo vasingagone masheya aya havazive chaizvo kuti vapei kune vanofarira zvehunyanzvi. Zvakanaka, kana iwe uchiziva kana usingazive nezvenyaya iyi, asi iwe uchida kupa mumwe munhu chipo chine hukama nenyika yeLinux uye yemahara software, pano tiri kuzokupa iwe dzinonakidza pfungwa. Imwe sarudzo ndeyekuti iwe unozvipa iwe, hongu.
Accessories: Iko kune penguin-yakaumbwa pendrives, kana iwe uchida diki diki inogona kunge iri iyi. Kune zvakare zvitoro senge freeguras.com uko kwavanotengesa manhamba (ivo vanozvigadzirisa ivo) nezve pasirese software yemahara uye chikamu chemari yakakwidzwa inoenda kumapurojekiti emahara kana iyo FSF. Kune zvakare mhuka dzakakamirwa dzeTux, uye dzakafanana muzvitoro zvezvitoyi. Mikana yacho yakakura chaizvo, chaizvo.
Zvipfeko: Iwe unogona zvakare kupa yakasarudzika zvipfeko. MuPampling pane geek t-shirts, asi kana iwe uchida imwe yakasarudzika nezvenyika yeLinux uye yemahara software (kana komputa sainzi mune zvese), unogona kutumira pfungwa yako ku peji ino yewebhu saka vanogona kuiburitsa pambatya kana kunamirwa ...
Mabhuku nemagazini: Muchitoro chako chemabhuku chaunofarira kana nzvimbo dzepamhepo senge Agapea neAmazon unogona kuwana mabhuku pane tekinoroji yakawanda, sarudzo yakanaka yekupa mazuva ano.
Makadhi echipo kana kunyorera: Dzimwe sarudzo, ipa makadhi echipo kana kunyorera seSpotify Premium, Steam ChipoKadhi kuti upe mitambo kubva kuValve chitoro cheLinux, kana chimwe chinhu chakajairika senge Amaozn Chipo Kadhi.
Hardware: maererano ne Hardware, unogona kutenga kubva kuArduino mabhodhi nezvimwe zvinhu, Raspberry Pi, Steam Controller, Steam Link, Google Chromecast, Steam Machine, kumakomputa edesktop, zvinyaradzo zvakaita seiyo Steam Machine, kana malaptop kana chiri chakakosha chipo kana pakati pezvakasiyana.
Ndinovimba wakavada, chero mibvunzo kana mazano, usakanganwa kusiya yako comment...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Pfungwa dzeLinux zvipo ino yeKisimusi 2017
Ndinoda kutora Tux plush yekupa musikana wangu kwemazuva aya. Pane chero munhu anoziva kwekutora?
Mhoro, ndinoziva vanovatengesa. Ivo chaizvo vakandipa imwe kare kare. Asi ini chokwadi handizive kuti kupi. Tarisa izvi kunze kana zvichikubatsira:
Ini ndakakanganwa kuzvitaura, Makorokoto pamufananidzo unoshamisa wawakaisa. Zvakanaka. Ini ndatoitora pasi ndokuigadzira yangu Wallpaper. Iyo inotapira chaizvo nekuti ndine katsi yemhuka. Kwaziwai!
Iwe wakanganwa iko iko kutsamwa kweTV mabhokisi kana kodi.
Iyo yakanyanya linuxero iri openelec bhokisi, asi kuve chiri nani chipo iri Android TV.
Kune iwo kubva ku25 Euro ne1 Gb ye RAM uye 8 yeROM, asi zvirinani izvo zve2 Gbs izvo zvinongodhura chete nezve € 30. NEXBOX muGearbest kana kuAmazon, Asi kana iwe uchida chimwe chinhu chakawanda, iyo imwecheteyo Hardware, iwo mabhokisi eXiaomi ane dhizaini dhizaini, yakafanana Hardware uye angangoita mashanu - 5 € mamwe maurillos akanaka.
Mhoroi, maita basa kwazvo nekutirava uye nemupiro wenyu. Izvo zvipo zvakanaka zvakare. Ndinozvinyora pasi ...
Ndatenda nekutikurudzira, iwe unogona kuona mafoto eedu tux pa Twitter @peluchestux
Ikozvino yave kuwanikwa Korora 25, iyo inozivikanwa kugovera kunoenderana Fedora 25
SolBuild, nyowani sisitimu yekugadzira Solus mapakeji